Mpanamboatra vokatra | Orinasa sy mpamatsy vokatra China
Fanohanana ambony sy ambany
Fampirantiana namboarina ho an'ny orinasa
ara-nofo : Vy vy
Toerana niandohana : Yangzhou
Haavony miasa : 10m
Ny halavan'ny Tube : 1.7m
famaritana : 48
Isan-karazany : Sarin'ny tohatra miakatra tohatra
Karazana : Disc buckle
Scaffold ho an'ny fanamboarana
Ny scaffold dia manondro sifotra isan-karazany natsangana teo amin'ny toeram-panorenana hahafahan'ny mpiasa miasa sy mamaha ny fitaterana mitsangana sy mitsivalana. Teny iraisana amin'ny indostrian'ny fanorenana, manondro ny fampiasana rindrina ivelany, haingon-trano anatiny na gorodona avo amin'ny tranobe fananganana izay tsy azo aorina mivantana. Natao indrindra hiasan'ny mpiasa amin'ny fananganana sy hidina na hiarovana ny harato ivelany sy ny fametrahana avo lenta ny singa. Raha atao an-kitsirano izy io dia ny fananganana scaffold.
Rafitra fanaovana sifotra
Namboarina tamin'ny akora avo lenta mba hiantohana ny fahatokisana ny vokatra vita.
Fitaovana maoderina misy teknolojia avo lenta kokoa.
Takelaka vy amin'ny lalantsara
Seranan-tsambo: Shanghai, Sina
Fahaiza-mamokatra: 300000 T isan-taona
Fepetra fandoavana: L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Money Gram
Ny scaffolding Ringlock dia iray amin'ireo karazan-trondro malaza indrindra eran-tany. Amin'ny maha rafitra scaffold modular azy, ny vokatra dia manana fiasa feno sy fampiasana maro samihafa.
Ny fototr'akanjo scaffolding sy jack U-head dia misy fantsom-pirazanana tsy misy kofehy, voanjo vy ary takelaka Q235.
Ity vokatra ity dia azo ampiasaina amin'ny karazan-tsakafo rehetra, ary mora ny mifandray amin'ny marindrano ny scaffold.
Vita amin'ny vy vy Q235 ambany karbôna, ny base jack scaffolding azo ovaina ary ny jack miendrika U dia mahazaka mavesatra mihoatra ny 100KN.
ara-nofo: Vy vy
Toerana niandohana: Yangzhou
Haavony miasa: 10m
Ny halavan'ny Tube: 1.7m
Fitaovana fanaovana sifotra
Ringlock dia rafitra scaffold manana tanjona marobe azo ampiasaina amin'ny endrika fidirana sy tohanana amin'ny indostrian'ny fanorenana, ny fikojakojana ny rindrina ivelany, ny fanamboarana any ivelany, ny lalan-kely, sns.
Isan-karazany: Sarin'ny tohatra miakatra tohatra
Yangzhou Wooten Scaffold Co., Ltd.a toy ny mpanamboatra scaffolda matihanina sy mpanondrana entana any Sina nandritra ny 18 taona, dia nanam-pahaizana manokana amin'ny famokarana scaffolding nandritra ny taona maro izahay, toy ny rafi-hidin-kazo, rafitra rafitra, tsangambato, takelaka vy ary kojakojam-boankazo.
Valan-javaboahary ao amin'ny Tanànan'ny Tianshan, ambanivohitra avaratry ny tanànan'i Yangzhou, faritanin'i Jiangsu